कास्कीमा कांग्रेस उम्मेदवारबीच दोहोरी, मन्त्रीलार्इ प्रश्नः फेवा र रुपामा किन विभेद ? « Janata Samachar
कास्कीमा कांग्रेस उम्मेदवारबीच दोहोरी, मन्त्रीलार्इ प्रश्नः फेवा र रुपामा किन विभेद ?
प्रकाशित मिति : 15 November, 2017 9:42 am
पोखरा । कास्कीका नेपाली कांग्रेसकै दुईजना उम्मेदवारबीच पत्रकार सम्मेलनमा दोहोरी परेको छ । नेपाली कांग्रेस कास्कीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवार तथा उनीहरुको आगामी योजनाबारे जानकारी दिन मंगलबार पोखरामा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसी उम्मेदवारबीच नै दोहोरी चलेको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बहालवाला न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री यज्ञबहादुर थापा र कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा कांग्रेसकै उम्मेदवार देवराज चालिसेबीच दोहोरी चलेको हो ।
चालिसेले सोधे: रुपा र फेवामा किन विभेद ?
मन्त्री थापाभन्दा अघि बोल्ने पालो पाएका एमाले उम्मदेवार रवीन्द्र अधिकारीका प्रतिस्पर्धी चालिसेले उम्मेदवारी दोहोर्याउन नहुने तर्क राखेका थिए । उनले मन्त्री थापाको नाम किटेरै लेखनाथ नगरपालिकामा पर्ने रुपातालका लागि तीन अर्ब बजेट छुट्याउँदा फेवातालका लागि तीन हजार पनि नआएको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘रुपाताललाई तीन अर्ब रुपियाँ आउँदा फेवातालको नाममा किन तीन हजार रुपियाँ पनि आएन ?’, उम्मेदवार चालिसेले थापालाई यसरी प्रश्न गरे ।
रुपाताल निवर्तमान व्यवस्थापिका संसदमा सांसद तथा बहालवाला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाको निर्वाचन क्षेत्र पर्दछ । अर्कातिर फेवाताल भने नेपाली कांग्रेसकै तर्फबाट सांसद बनेकी शारदा पौडेलको क्षेत्रमा पर्छ । शारदा हाल प्रदेशसभा ३ (क) मा उम्मेदवार बनेकी छन् ।
उम्मेदवार चालिसेले मन्त्री थापाप्रति कटाक्ष गर्दै जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो लगायतका क्षेत्रमा विगतका जनप्रतिनिधिले केही गर्न नसकेकोमा आक्रोश पोखे । ‘विगतमा निर्वाचित सांसदहरु व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा लागे’, उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम गर्न सकेनन् ।’
फेवा जोगाउन आफैँ सक्रिय बनौँः मन्त्री थापा
चालिसेपछि बोलेका कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बहालवाला मन्त्री यज्ञबहादुर थापाले आफ्नै पार्टीका उम्मेदवार चालिसेले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
‘रुपाताललाई तीन अर्ब रुपियाँ आउँदा फेवातालको नाममा किन तीन हजार रुपियाँ पनि आएन ?’,
‘एकपटकलाई मलाई जिताउनुभयो’, उनले चालिसेको नामै किटान गरेर भने, ‘फेरि अर्कोपटक पनि मलाई सहयोग गर्नुहोस् ।’ मन्त्री थापाको भाषण सकिएपछि उम्मेदवार चालिसेले आफ्नो भनाई सच्याउँदै थपे, ‘एकपटकलाई त जिताउनुभयो । अर्को पटक पनि
मन्त्री थापाले आफ्ना सहकर्मीले उठाएको विषयलाई इंगित गर्दै रुपाताल मात्र नभइ फेवाताल लगायत कास्कीका सबै तालतलैयाको विकासमा विगतमा जस्तै यसपटक पनि आफ्नो सहभागिता रहने वचनवद्धता व्यक्त गरे । यद्यपि उनले फेवातालको संरक्षणमा स्थानीयबासी नै सक्रिय हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
त्यही कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कास्कीमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुको परिचय गराउनुकासाथै चुनाव जितेमा कांग्रेसले कास्कीमा गर्ने कामको योजना पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।